Florida ndiyo yakanyanya kutapukirwa, Hawaii ndiyo yakanyanya kuuraya US Tourism Destination
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Florida ndiyo yakanyanya kutapukirwa, Hawaii ndiyo yakanyanya kuuraya US Tourism Destination
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • LGBTQ • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Vashanyi paMiami Airport
Vols kuFlorida neHawaii zvizere maHotera ari kuita zvakanaka. Mitsara mumaresitorendi inowanzoitika. Mushanyi anokanganwa ari chaizvo muCOVID-19 kudenga kana achishanyira Zuva, kana iyo Aloha Taura panguva ino.
Florida ine kupararira nekukurumidza kwe COVID-19 hutachiona muhukuru Tourism State nhasi ine 25991 mitsva mitsva kana 1210 kesi pamamirioni evagari. 27 vanhu vakafa kana 1.25 pamiriyoni
Hawaii ndiyo inonyanya kuuraya US Tourism State ine 4 vakafa kana 2.17 pamiriyoni. Hawaii yakanyora 845 mitsva mitsva kana 584 pamiriyoni
Hawaii ndeye Democratic State, Florida a Nyika yeRepublican.
Mamirioni eAmerica anoti Hungu kuzororo,…. asi zvino?
Izvo hazvinyatso kuita musiyano kuhutachiona hwe COVID kana US State ichimhanyiswa neRepublican kana Democratic Gavhuna.
Florida neHawaii Vanoda Vashanyi kurufu here?
Kuvhura Hurumende kuHurumende kunogona kunge kuri nzira inovhurawo Nyika kumusoro kuti inyorwe hutachiona hweCOVID. Florida yakavhurika yekushanya, uye saHawaii, inogamuchira vashanyi nemaoko maviri.
92% yevafambi veLBBTQ muUS vanobayiwa jekiseni. Fortunate ese States ari LGBTQ-ane hushamwari.
Nyika mbiri idzi dziri kuita makwikwi ekukwikwidzana pamwe chete kwemavhiki mashoma apfuura pane ane chirwere chakaipisisa mumakesi matsva eCOVID-19, uye nyika dzese dzinoramba kudaidzira zvirango zvine hungwaru indasitiri yayo inowana mari.
Iko kuenzanisa kunoenderana neCOVID 19 manhamba ezuva ranhasi uye kwete nguva yekuwedzera.
Nekufamba kwenguva Hawaii yaive neakaderera COViD-19 nhamba ye chero Nyika. Huwandu hwacho hwakabva pane hwakaderera kusvika pakuvhundutsa mushure mekurambidzwa kwekufamba uye zvaidiwa zvakachinjwa kutanga kwemwedzi uno.
Musi waApril 18, 2020, iri bhuku yakataurwa nezveHawaii yakavharwa after COVID -19 hutachiona huwandu hwakapfuura zana muzuva rimwe. Vhiki rino chete Hawaii yakanga yave nehutachiona hutsva hunosvika chiuru nemazana maviri muzuva rimwe chete, uye kushanya kunoramba kuchikwira pasina kana zvirambidzo zvinoonekwa zviripo.
Hawaii yakavhurika vachengeti vashanyi mwedzi uno, uye kune vashanyi vane bvunzo dzisina kunaka kubva muna Gumiguru 2020.
Hawaii yakasununguka mask uye social distancing zvinodiwa mumaresitorendi, mahotera, uye mamwe emukati marongero, uye COVID iri kutenderera apo kushanya kuri kuwedzera.
Florida yakatiza mukudzivirira zvirambidzo zvakawanda, yakachengetwa pakushambadzira senzvimbo yakanaka yekufamba, uye COVID iri spiking.
Ose anoti Florida, neHawaii zvakafanana, kuti kupararira kwe COVID kuri kukwirira-nguva panguva ino kutyisidzira vagari vemo kuti vavande mudzimba dzavo.
Ipo Hawaii ichine mabhedha emuchipatara akakwana panguva ino, muFlorida makamuri ekukurumidzira akapararira kumigwagwa kare.
Muvhiki yapfuura, Florida yanga iine mamwe makesi eCOVID kupfuura ese makumi matatu matunhu ane yakaderera kesi mitengo, yakasanganiswa.
Nyika mbiri idzi dzinopfuura makumi mashanu muzana yehuwandu hwadzo jekiseni, uye nyika mbiri dzinoziva kuti nhamba yenjodzi iri mumusasa usina kubayiwa.
Nyika mbiri idzi dzinodawo hupfumi hwekushanya kuti hubudirire uye vakunde 'funga nezvezvirambidzo zvakaomarara. Gavhuna weHawaii Ige akaisa zvimwe zvirango zvekufananidzira kumashure munzvimbo. Anoda maresitorendi izvozvi kuti angotengesa makumi mashanu muzana yenzvimbo yavo.
Sezvo United States ichiri yakavharwa kune dzakawanda kushanya kwenyika, nyika dzese dzinovimba nevashanyi vekumba. Vafambi veEurope vanoshayikwa muFlorida, nepo maJapan, nemaKorea vasichaoneke mumaresitorendi, muzvitoro nemumabhishi.
Domestic Tourism zvakadaro iri kuripa kurasikirwa uku uye yanga ichikura zvisina mukare akamboona.
Zvinoshamisa kuti Gavhuna Ige muHawaii akaudza vashanyi kuti hapana chikonzero chekufamba panguva ino, uye neHawaii Tourism Authority yanga ichiedza kuita kuenda kuHawaii kusagadzikana sezvinobvira. Zvese izvi zvinoramba zviri panzeve dzerufu.
Ruramisiro yevakuru vakuru kuti vashanyi havanyatso kusangana nevanhu vemo inoseka, uye munhu wese anozviziva.
Hawaii neFlorida zvakatove padhuze nepadhuze neumwe mushure meHawaiian Airlines iniyakaunza dzisiri-dzinomira nendege kubva Honolulu kuenda Orlando.
Iyo "yakasara nyaya" haisati yazivikanwa. Zvinotyisa kunyangwe kufunga nezve mhedzisiro, Nhamo, mimwe mitsara yakatonyorwa pamadziro.
Nyamavhuvhu 19, 2021 pa13: 53
Muno muHawaii, huwandu hwakawanda hwenyaya nyowani hupararira munharaunda pakati pemhuri uye kuungana kusiri kwevashanyi. Kana iko kupararira kwaive kunzvimbo dzekuzorora dzejecha nzvimbo dzevashanyi, panzvimbo yenzvimbo dzekugara, kushanya kungadai kwakavharwa kuitwazve mumoyo. Isu tese tinoda kunongedza minwe, asi isu hatisi mapurisa isu nekuti zviri nyore kunongedza vamwe minwe
Joan Enriquez-Noguera anoti:
Nyamavhuvhu 17, 2021 pa09: 26
Izvo zvese ndezve mari.Hawaii inoda mari.Vanhu vaneta nekuvharirwa mukati uye vanoda zororo chero zvodii. Mira kufamba, gara kumba, daro renharaunda, pfeka mamask, Geza maoko, Sanitize, Kuti tigone kuwana Kuburikidza neizvi uye kudzorera hupenyu hwedu kumashure. mukana wekuvandudza mamiriro ezvinhu aya. Hawaii neFlorida vanofanirwa kuvhara musuwo uye kuchenesa zviito zvavo. Ndiri kusuwa vanhu vemuHawaii pavanenge vachirwiswa.
raymond pasi anoti:
Nyamavhuvhu 17, 2021 pa06: 28
usauye hauna basa nazvo.
Nyamavhuvhu 17, 2021 pa04: 49
Kana kuongororwa kwakamiswa kune vanhu vakabayiwa comimg kuenda kuHawaii kesi dzakatanga kurova mukati memavhiki mashoma vakabaiwa vanhu vari kuiunza munzvimbo dziri kuderera mumaresitorendi nemahotera kusvika ku50% haimise vanhu kuunza ivo vanofanirwa kuongororwa vasati vapinda muHawaii.